5 Zvekufunga Paunenge Uchisarudza Cloud Storage Kuwedzera Kudyidzana Uye Kugadzira | Martech Zone
Kugona kuchengeta mafaera akakosha senge mafoto, mavhidhiyo uye mimhanzi zvisina musono mugore itarisiro inokwezva, kunyanya ne (zvinei) ndangariro dzakasimba munharembozha uye mutengo wakakwira wekuwedzera ndangariro.
Asi chii chaunofanira kutarisa pakusarudza gore rekuchengetedza uye faira-kugovera mhinduro? Pano, tinoputsa zvinhu zvishanu izvo munhu wese anofanira kufunga nezvazvo asati afunga kwekuisa data ravo.
masimba – Ndiri kutonga here? Imwe yezvidziviriro zvekuvimba ndangariro dzako dzakakosha kune wechitatu-bato ndeyekuti unotadza kutonga pamusoro pekuchengeterwa zvinhu. Inogona kunge isiri chinhu chinofungwa nemunhu wese, asi mitemo yedata muUS inosiyana zvakanyanya kubva kuEurope, semuenzaniso. Kwete izvozvo chete, asi kugona kwevanopa kuchengetedza kwegore kukohwa ruzivo rwako nekuda kwezvinangwa zvekutengesa kunogona kuve kusingazivikanwe uye kusingadiwe kutengeserana kure.
chibatiso - Yangu data yakachengeteka here? Hapana mupi wekuchengetedza gore anozviratidzira sevasina njodzi, asi pakave nezviitiko zvakawanda zvepamusoro apo mafemu makuru etekinoroji akatadza kurwiswa necyber. Isu tinotungamira nzira mundima iyi nekushanda kune zviyero zvegiredhi remauto. Kupfuurirazve, isu tinopa mutengi-parutivi encryption, zvinoreva kuti data rakavharidzirwa risati rasvika kumaseva edu. Kuvaka pane iyi dingindira rekutonga, zvinoreva kuti hatigone kukohwa data rako kuti uwane bhizimusi.
mutengo -Ini ndiri kubhadhara? Imwe yekutanga inokwezva kune vanopa kuchengetedza kwegore ndiyo yakachipa yekupinda mutengo, kunyanya kana yakakamurwa pamwedzi. Dambudziko nderekuti vashandisi vanopisa nekukurumidza sei kuburikidza neichi chishoma chekuchengetedza - uye nekukurumidza vanovimba nemupi uye kubhadhara mari inoramba ichiwedzera.
Kudekara Use - Zviri nyore kushandisa? Kunyanya kune avo vanoita nhanho dzekutanga mumusika wekuchengetedza gore, pane mukana wekurasika pakati pejagoni. Isu tinodada nekureruka kwedu kwekushandisa kungave kuburikidza neapp yedu kana padesktop. Zvichitaurwa zviri nyore, tinoita kuti zvive nyore kugovera mafaera nemhuri, shamwari uye vatinoshanda navo.
Data Recovery -Ndinogona kudzoreredza mafaera? Zvinosuruvarisa, kurwiswa kwe-cyber kutyisidzira kunoramba kuchiwedzera, izvo zvinoisa mafaira panjodzi yehuori. Isu tinopa vashandisi kugona kuwana mafaera apfuura, zvichireva kuti zvinhu zvakaita serewareware hazvifanire kuparadza ndangariro dzekare dzakachengetwa pachikuva.
Nezvivharo zvemuno, zvemunyika uye kunyangwe zvepasirese zvinoparadzanisa vanhu sezvisati zvamboita, kuvimba nekuchengetwa kwegore uye mapuratifomu ekugovanisa mafaera kuti vanhu varambe vakabatana hakuna kumbonyanya kukura. Isu tinotenda kuti nekutarisa iyi mibvunzo yakakosha, vatengi vachange vaine zvese zvavanoda kuti varambe vakabatana kuburikidza nenguva dzakaoma kwazvo.
pCloud inopa yakakwana, iri nyore-kushandisa-yefu yekuchengetedza mhinduro kune vanhu uye mabhizinesi zvakafanana. Maitiro edu anosanganisira tekinoroji-yekuona-neyekupedzisira mushandisi mupfungwa. Mamwe masevhisi efu angave akanyanya tekinoroji uye haana mushandisi-ane hushamwari, kana iwo haana kukwana zvakakwana kuti vashandisi vawane zvese zvavanoda kubva mukuchengetedza gore.
WINDISA iyo iPhone 13 Pro kana Samsung S21 Ultra + 2TB yehupenyu hwese kuchengetedza izvi BLACK MASHANDI. Kuti upinde mumakwikwi, enda pano:
Pinda Makwikwi Zvino!
Tags: assetsset managementbackupsgorecloud storagedata recoveryData Securitydigitaalinen aseti manejimendifaira kubatanafaira manejakugovera fairapcloud